I-RetroPie: vula i-Raspberry Pi yakho ibe ngumshini wokudlala kabusha | Izingxenyekazi zekhompyutha zamahhala
I-RetroPie: vula i-Raspberry Pi yakho ibe ngumshini wokudlala kabusha
Isaka | | Ukusajingijolo Pi
Uma unentshisekelo ngemidlalo yevidiyo ye-retro, leyo mikhakha yakudala emangalisayo engapheli esitayeleni, khona-ke ngokuqinisekile ubheke bonke labo abathandekayo nabamaphrojekthi avela ku-Raspberry Pi. Enye yaleyo misebenzi yokujabulela ukuphindisela kabusha I-RetroPie, futhi engizodalula kuzo zonke izinkinobho.
Iqiniso ukuthi kunentshisekelo enkulu ngokwengeziwe kulolu hlobo lwephrojekthi, kusukela ku-cumphakathi wabasebenzisi onentshisekelo ngalawa mavidiyo wevidiyo kusuka kuzingxenyekazi ezedlule akuyeki ukukhula. Eqinisweni, ngisho nabanye abakhiqizi abanjengo-SEGA noma u-Atari banqume ukunika eminye yemishini yabo edlule ithuba lesibili lokuhlangabezana nalesi sidingo esikhulu ...
Ungahle ube nentshisekelo yokwazi ifayili le- emulators engcono ye-Raspberry Pi, kanye namanye amaphrojekthi afana nalawa I-RecalBox y IBatocera. Futhi namanye amagajethi wabalawuli okuzakhela awakho umshini we-arcade.
1 Kuyini i-RetroPie?
1.1 Amapulatifomu alingisiwe
2 Ngingaba kanjani neRetroPie?
2.1 Kulula kakhulu (abasebenzisi be-novice)
2.2 Thola amaROM
3 Izengezo ezitholakalayo
I-RetroPie kuwumsebenzi we umthombo ovulekile eyenzelwe ngokukhethekile ukuguqula i-SBC yakho ibe yisikhungo segeyimu yevidiyo ye-retro, okungukuthi, umshini wegeyimu wangempela we-retro. Ngaphezu kwalokho, iyahambisana namabhodi afana ne-Raspberry Pi ezinhlotsheni zayo ezahlukahlukene, kepha futhi nezinye ezifana ne-ODroid C1 ne-C2, kanye nama-PC.
Kusukela kuhlobo lweRetroPie 4.6, ukuxhaswa kweRaspberry Pi 4 nakho kufakiwe
Le phrojekthi yakhela kweminye imisebenzi ekhona esivele ekhona njenge Raspbian, EmulationStation, RetroArch, Kodi nabanye eziningi ezikhona. Konke lokhu kuhlanganiswa ndawonye kuphrojekthi eyodwa eyodwa ukukunikeza ipulatifomu ephelele nelula ukuze ukhathazeke ngokudlala imidlalo oyithandayo ye-Arcade.
Kepha uma ungumsebenzisi othuthukile, kufaka phakathi okuhle amathuluzi ahlukahlukene wokumisa ukuze ukwazi ukuguqula nokwenza ngezifiso uhlelo cishe ngendlela othanda ngayo.
I-RetroPie ingalingisa amapulatifomu omdlalo wevidiyo angaphezu kwama-50 ukuze usebenzise amaROM emidlalo yawo ukuwavuselela namuhla. Okudume kakhulu yile:
Umbala womfana womdlalo
Umbala we-NeoGeo Pocket
ISinclair ZX Spectrum
Futhi okuningi ...
Ngingaba kanjani neRetroPie?
Ungakwazi landa i-RetroPie ngokuphelele free kusuka kuwebhusayithi esemthethweni wephrojekthi. Kepha ngaphambi kokuthi ugijimele kuyo, kufanele ukhumbule ukuthi iRetroPie ingasebenza ngezindlela eziningana:
Yifake kusistimu yokusebenza ekhona, njengeRaspbian. Imininingwane engaphezulu ye- I-Rasbpian y Debian / Ubuntu.
Qala ngomfanekiso we-RetroPie kusuka ekuqaleni bese wengeza isoftware eyengeziwe.
Ngaphandle kwalokhu kuhlukahluka, izinyathelo okufanele zilandelwe ukufaka i-RetroPie kusuka ekuqaleni ku-SD okulandelayo:
Landa isithombe de I-RetroPie ehambelana nohlobo lwePi yakho.
Manje kufanele ukhiphe isithombe esicindezelwe ku .gz. Ungakwenza ngemiyalo evela ku-Linux noma ngezinhlelo ezinjenge-7Zip. Umphumela kufanele ube yifayela eline- .img isandiso.
Ngemuva kwalokho sebenzisa uhlelo oluthile ukuze ukwazi fometha i-SD bese udlulisa isithombe nguRetroPie. Ungakwenza nge I-Etcher, futhi ehambisana nazo zombili iWindows, MacOS neLinux. Le yinqubo efanayo yabo bonke.
Manje faka ikhadi le-SD kufayela lakho le- Ukusajingijolo Pi bese uyiqala.
Uma usuqalile, iya kumenyu yokumisa esigabeni WiFi ukuxhuma i-SBC yakho kunethiwekhi. Lungiselela i-adapter yenethiwekhi yakho ehambisanayo, ngoba ungaba nebhodi elidala eline-adaptha ye-USB WiFi, noma ungaba nePi ene-WiFi edidiyelwe, noma ungaxhunywa ngentambo ye-RJ-45 (Ethernet). Kufanele ukhethe inketho yakho bese uxhuma kunethiwekhi yakho ejwayelekile.
Uma uthanda, yize kungadingeki ezimweni eziningi, ungafaka isoftware eyengeziwe noma ama-emulators amaningi.
Uma sekuzuziwe, okulandelayo lungiselela izilawuli zakho noma abalawuli begeyimu, uma unabo. Ukwenza lokhu, izinyathelo yilezi:
Xhuma izilawuli ze-USB onakho. Kunezilawuli eziningi ezihambisanayo ze-RetroPie ku-Amazon. Isibonelo I-QUMOX noma i INEXT.. Ungasebenzisa ezinye izilawuli ezintsha.
Lapho ixhunyiwe, i-RetroPie kufanele iqalise ngokuzenzakalela ifayela le- interface ukuzilungiselela. Izokucela uchungechunge lwezenzo kumsizi okufanele umlandele. Uma wenza iphutha, ungakhathazeki, ungangena kwimenyu ngokuhamba kwesikhathi ukuze ushintshe ukucushwa ngokucindezela ku-Start noma nge-F4 bese uqala kabusha.
Ngemuva kwalokho ongakwenza dlulisa amaROM ukuba nemidlalo oyithandayo yevidiyo ilungele ukugijima kusuka ku-Raspberry Pi yakho. Ungakwenza ngezindlela eziningana, enye nge-SFTP (ethande ukuba yinkimbinkimbi ngokwengeziwe), ngeSamba (nayo inzima kakhulu), kanti enye nge-USB (elula futhi ekhethwayo iningi). Ngokukhethwa kukho kwe-USB:
Sebenzisa i-pendrive noma imemori ye-USB efomethwe ngaphambilini ku-FAT32 noma ku-NTFS. Kokubili kuyasebenza.
Ngaphakathi kufanele wakhe ifayela le- ifolda ebizwa nge- «retropie» ngaphandle kwezimpawu zokucaphuna.
Manje khipha ngokuphepha i-USB bese uyifaka kufayela le- I-USB port we-Raspberry Pi. Yishiye kuze kube yilapho i-LED iyeka ukukhanya.
Manje nqamula i-USB kusuka kuPi futhi bese uyifaka ku-PC yakho ukuze dlulisa amaROM ngaphakathi kwesiqondisi se-retropie / roms. Uma ama-ROM ecindezelwe, kuzodingeka uwavule ukuze avuleke ukuze asebenze. Ungakha futhi amafolda ngaphakathi kwamaRom kukhathalogi yamaROM ngepulatifomu, ngokwesibonelo, ungakha ifolda ebizwa ngokuthi imidlalo ye-Nintendo NES, njll.
Phinda ufake i-USB ku-Pi yakho, linda i-LED iyeke ukukhanya.
Manje uvuselele i-EmulationStation ngokukhetha Qala kabusha kusuka kumenyu enkulu.
Futhi manje kukhona kuphela qala umdlalo… By the way, ukuphuma emdlalweni ocwiliswe kuwo, ungasebenzisa izinkinobho zokuqala nezokukhetha ezicindezelwe ngasikhathi sinye kumlawuli wakho wegeyimu futhi izobuyela kwimenyu enkulu ye-RetroPie
Kulula kakhulu (abasebenzisi be-novice)
Si awufuni ukwenza impilo yakho ibe nzima kakhulu ngama-ROM noma ngokufakwa kwe-RetroPie, kufanele wazi ukuthi asevele ethengisa amakhadi we-SD ngalolu hlelo olufakiwe, ngaphezu kwezinkulungwane zamaROM asevele efakiwe ...
Isibonelo, ku Amazon thengisa eyodwa 128GB ikhadi le-microSD umthamo we-Samsung brand futhi lokho sekuvele kufaka i-RetroPie, kanye nama-ROM angaphezu kwe-18000 wegeyimu yevidiyo asevele efakiwe.
Khumbula ukuthi kunamakhasi amaningi ewebhu akuvumelayo landa ama-ROM ngokungemthetho, ngoba bayimidlalo yevidiyo ephathelene. Ngakho-ke, kufanele ukwenze ngokuzibeka wena engcupheni, wazi ukuthi kungenzeka ukuthi wenza ubugebengu ngokulwa nempahla enobuhlakani bengqondo.
Ngaphezu kwalokho, ku Internet Archive ungathola futhi ama-ROM amadala kakhulu wegeyimu yevidiyo. Futhi-ke nawe unayo AmaROM ngokuphelele futhi kusemthethweni uma ufuna, njengaleyo ye- MAME.
Kufanele wazi ukuthi kunenani elikhulu le- Amaphrojekthi we-DIY ukudala owakho umshini we-Arcade oshibhile futhi omncane nge-Raspberry Pi, kanye nokuphinda wenze ezinye iziduduzo eziningi kusukela esikhathini esidlule ngendlela elula. Ngalokhu, i-RetroPie ikunikeza ngemibhalo ethokozisayo:
I-DIY yegobolondo le-acrylic
Kepha lokho akuyona ukuphela kwento onayo ezandleni zakho, futhi zikhona kits ezithakazelisayo kakhulu ongathenga ukuhlanganisa ikhonsoli yakho ye-retro ngendlela elula:
IGeekPi igobolondo le-retro console elingisa iSuperCOM
I-NESPi Elinye icala elilingisa iNintendo NES yasenganekwaneni
Owootecc icala elifana neGameBoy le-Raspberry Pi Zero
Indlela ephelele ye-athikili: Izingxenyekazi zekhompyutha zamahhala » Ukusajingijolo Pi » I-RetroPie: vula i-Raspberry Pi yakho ibe ngumshini wokudlala kabusha
millis (): konke odinga ukukwazi ngomsebenzi we-Arduino
I-Odroid N2: enye i-SBC enhle eya ku-Raspberry Pi